XOG XASAASI AH: Madaxtooyada Soomaaliya oo bilowday qorshe halis galinaya daganaanshaha Siyaasadeed ee dalka.. – Puntlandtimes
XOG XASAASI AH: Madaxtooyada Soomaaliya oo bilowday qorshe halis galinaya daganaanshaha Siyaasadeed ee dalka..
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxtooyada Soomaaliya ayaa bilowday qorshe halis galinaya daganaanshaha Siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana hay’adda DFS iyo maamul gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda.
Shabakad isku xiran oo u badan Saaxiibada Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha ayaa bilaabay qorshe ay ku doonayaan in ay isbedel siyaasadeed uga curiyeen gudaha dawlad gobaleedyada, gaar ahaana Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ay hadda u arkayaan kuwa kasoo horjeeda arrimahooda.
Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin oo ah nin saameyn ku leh arrimaha Qadar ee gudaha dalka, ayaa hadda ciyaaraya door mug-weyn oo uu ku doonayo in uu meesha uga saaro Madaxweynayaasha Galmudug & Koonfur Galbeed.
In lagu kiciyo xildhibaanada labada dawlad gobaleed, isla markaasna ay noqdaan kuwa meesha laga saaro ayaa ugu weyn qorshahan oo halistiisana wata, aana la aqoon waxa ka dambeyn karra.
Labada dawlad gobaleed Madaxdooda ayaa taageeray qaraarkii ay wadamada Sacuudiga, Imaaraatka, Baxreyn iyo Masar xariirka ugu jareen dawladda Qadar, taas oo ay sheegtay Soomaaliya in ay dhex ka noqotay.
Mooshino ka dhan ah Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Axmed Ducaale Geel Xaaf oo dhawaan la doortay ayaa hadda laga bilaabay gudaha Muqdisho, waxaana mar horeba uu gaaray magaalada Cadaado.
In khilaaf la dhex-dhigo xubnaha ugu sareeya labadan maamul ayaa qeb ka ah qorshaha Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana si gaar ah khilaafkan uga curtay gudaha Galmudug.
Xaafiisyada Madaxweynaha & Ra`iisulwasaaraha ayaa kala adeegsanaya Madaxweyne kuxigeenka iyo Gudoomiyaha baarlamaanka ee Galmudug, taas oo keentay in xiisadda Cadaado ay noqoto mid u muuqata qaab qabaa’il, halisna u horseedi karta daganaanshaha gobalada dhexe ee Soomaaliya.
Lama garan karro waxa ka dhalan xiisaddahan iyo abaabulkan siyaasadeed ee cusub, laakiin shaki ma saarna in duufaanta siyaasadeed ay noqon karto mid gaarta meelo badan, gaar ahaana bartamaha u galaysa Hay’addaha dawladda Faderaalka ee dalka, taas oo haddii ay dhacdana xaalad kale noqon karaysa.